अभिनेता मार्टिन शीन नयाँ एकलकेयर व्यवसायिक मा स्टार - कम्पनी | सेप्टेम्बर 2021
कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समाचार, कल्याण घरपालुवा जनावर समुदाय, कम्पनी मनोरञ्जन समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण चेकआउट कम्पनी, चेकआउट
मुख्य >> कम्पनी >> एकलकेयरको नयाँ व्यवसायिकमा मार्टिन शीन ताराहरू
तपाईंले आफैलाई सोध्नु भएको पाउन सक्नुहुन्छ, के यो मार्टिन शीन सिंगलकेयरमा वाणिज्यिक थियो? वा हुनसक्छ तपाईंले सोध्नु भएको छ, सिंगलकेयर के हो? तपाईं सहि ठाउँमा आउनुभएको छ। हामी दुबै उत्तर छ।
हो, मार्टिन शीन हाम्रो नयाँ विज्ञापन अभियानमा छ। अब हामी तपाईलाई को बारे को लागी हामी केहि बताउँछौं: सिंगलकेयरले नि: शुल्क प्रिस्क्रिप्शन बचत कार्ड प्रदान गर्दछ। हामी विश्वास गर्दछौं कि तपाईको स्वास्थ्य बीमा स्थितिले फरक पार्दैन, तपाईलाई औषधि लिन पागल मूल्य तिर्नु पर्दैन आवश्यक छ राम्रो महसुस गर्न। हाम्रो छुट कार्ड प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छ, कुनै साइन-अप आवश्यक छैन, कुनै तार जोडिएको छैन।
यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे यहाँ छ: पहिले, हाम्रो प्रयोग गर्नुहोस् खोजी उपकरण तपाइँको पर्चेको लागत कति थाहा पाउन। तपाइँको जिप कोड प्रविष्ट गर्नुहोस् एक स्थानीय फार्मेसी पत्ता लगाउन जुन हाम्रो कुपनहरू स्वीकार गर्दछ। सही बचत मूल्य प्राप्त गर्न, तपाईंको प्रिस्क्रिप्सन जानकारी मिलाउन टगलहरू प्रयोग गर्नुहोस्: ब्रान्ड नाम बनाम जेनेरिक, सही फारम र खुराक, र तपाईंलाई आवश्यक मात्रा। या त तपाईंको ड्रग कूपन प्रिन्ट गर्नुहोस् वा ईमेल वा तपाईंको फोनमा पाठ पठाउनुहोस् (वा अनुप्रयोग प्रयोग गर्नुहोस्) तपाईंको फार्मेसीमा देखाउनका लागि। तपाईंले आफ्नो औषधिहरू 80०% सम्मको बचत पाउनुहुनेछ।
एकलकेयर फार्मेसी कार्ड CVS, Walmart, Walgreens, Albertsons, र Kroger सहित देश भर मा ,000 35,००० पार्टनर फार्मेसीहरुमा स्वीकार गरिएको छ। तपाईं यसको प्रयोग गरी सक्नुहुनेछ यदि तपाईंसँग बीमा छैन भने नगद मूल्यमा बचत गर्न help तर यसले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ यदि तपाईंसँग बीमा वा मेडिकेयर भाग डी योजना । तपाईं आफ्नो बीमा र पार्ट डी दरहरूमा शीर्षमा हाम्रो कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, तर हाम्रो बचतको साथ तपाईंको प्रतिलिपि मूल्य जाँच गर्न निश्चित गर्नुहोस्। तपाईं भेट्न सक्नुहुन्छ कि हामीले यो अवसरमा हरायौं!
द गो मा बचतको लागि, हाम्रो अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न नबिर्सनुहोस् गुगल प्ले एन्ड्रोइड वा को लागी App Store IOS को लागी। केहि प्रश्नहरू छन्? हामीलाई 84 844-२34-30-305-307 मा कल दिनुहोस् वा हामीलाई खोज्नुहोस् फेसबुक ।
lyrica र gabapentin एउटै कुरा हो
कति पटक म 800mg मोट्रिन लिन सक्छु?
के एक औषधि परीक्षण मा amphetamines रूपमा देखाउँछ
योजना बी गोली तपाइँको शरीर को लागी खराब छ